भुटानको जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया खारेज, किन रोकियो निर्णय ? - Naya Patrika
भुटानको जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया खारेज, किन रोकियो निर्णय ?
अच्युत पुरी, काठमाडौं | साउन ०२, २०७४
तालुक मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआएकाले प्रक्रिया खारेज गर्नुपरेको भनाइ
नेपाल वायुसेवा निगमले भुटानको जहाज भाडामा ल्याएर उडाउने प्रक्रिया खारेज गरेको छ । तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त नभएपछि जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया खारेज गरिएको निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए । ‘कानुनअनुसार नेपालमा १५ वर्षभन्दा पुराना जहाज आयात गर्न नपाइने प्रावधान छ, हामीले खरिद नभई भाडामा मात्र ल्याउन लागेकाले प्रस्ताव नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण हुँदै मन्त्रालयसमेत पुगेको प्रस्ताव स्वीकृत नभएपछि प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपरेको हो ।’
मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत नगरेपछि निगमले तत्कालका लागि जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया खारेज गरेको छ । ‘अब हामीसँग अर्को जहाज ल्याएर उडाउने समय छैन,’ कंसाकारले भने, ‘उडान कटौती गरेरै भए पनि व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प रहेन ।’ नेवानिले भुटान एयरले अहिले काठमाडौं–पारो रुटमा उडाइरहेको एयरबस ए ३१९–१०० मोडलको जहाज ल्याएर उडाउने योजना बनाएको थियो ।
किन रोकियो निर्णय ?
निगमले बढीमा दुई महिनाका लागि मात्र भाडामा जहाज लिएर उडाउने प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण पठाएको थियो । तर, प्राधिकरणले नियमअनुसार जहाज ल्याउँदा (खरिद या भाडा) दुवैमा १५ वर्षे प्रावधान लागू हुने भन्दै स्वीकृति नदिएपछि निर्णयको जिम्मा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । तर, निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले निर्णय भने निगमको पक्षमा गर्न सकेनन् । पर्यटन मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ ।
त्यसपछि मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि पर्यटनमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, दुई पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार जहाज आइपुग्ने अवधिभित्र समेत प्रधानमन्त्रीबाट कुनै निर्णय नआएपछि यो प्रक्रिया खारेज हुन पुगेको छ । निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको फाइल अझै पनि पर्यटन मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब सम्झौता अवधि घर्किसकेका कारण भुटान एयरको जहाज नेवानिले नउडाउने पक्का भयो ।’
गुडविल गुम्ने खतरा
निगमले जहाज भाडामा लिने गरी विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्दा तेस्रो प्रयासमा मात्र दुईवटा कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो । ती दुई कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकनपछि निगमले भुटान एयरको जहाज ल्याएर उडाने निर्णय गरेको थियो । बोइङ ७५७ सी चेकका क्रममा सिंगापुर लगिएपछि निगमले १ साउनदेखि उडाउने गरी जहाज भाडामा लिने प्रक्रिया थालेको थियो । जहाज नआएपछि हुने घाटाको हिसाब नगरे पनि यसबाट गुम्ने गुडविल सबैभन्दा पीडादायी हुने निगमको भनाइ छ । निगमले अब अग्रिम बुकिङ गरिसकेका हजारौँ यात्रुलाई अन्य वायुसेवामा ल्याउनुपर्नेछ, त्यसक्रममा चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । सबै गन्तव्यमा अन्य वायुसेवाको तुलनामा निगमको भाडा सस्तो छ ।
बोइङ सिंगापुर लगियो
निगमसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा तीन जहाज (एयरबस ए–३२० दुई र बोइङ–७५७ एक) छन् । त्यसमध्ये बोइङ–७५७ अहिले लामो समय लगाएर हुने मर्मत (सी चेक)का क्रममा सिंगापुर लगिएको छ । दुई जहाजबाट निगमले उडान गरिरहेको छ । सी–चेक लामो समय लगाएर हुने मर्मतको चरण हो । यस चरणमा इन्जिनबाहेक विमानका हरेक पार्टपुर्जाको जा“च गरिन्छ । बोइङ सी–चेकमा जाँदा निगमका नियमित उडान प्रभावित भई निगमको विश्वसनीयता नघटोस् भन्ने उद्देश्यले जहाज भाडामा लिन लागेको थियो । करिब दुई महिना लाग्ने यसप्रकारको चेक छिटो गर्न आग्रह गरिएको महाप्रबन्धक कंसाकारले जानकारी दिए ।
नेपाल एयरलाइन्सको अनलाइन टिकट बुकिङ सुरु
नेपाल वायुसेवा निगमले अनलाइन प्रणालीबाट टिकट बुकिङ सेवा सुरु गरेको छ । आइतबारदेखि सुरु गरेको यो सेवाअन्तर्गत अब संसारको जुनसुकै स्थानका यात्रुले पनि अनलाइनबाटै निगमको टिकट बुकिङ गर्न सक्नेछन् । निगमको इतिहासमा पहिलोपटक अनलाइन सेवा प्रारम्भ भएको निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए । निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले अनलाइन बुकिङ सेवाको उद्घाटन गरे । व्यवस्थापन सुधारको एक प्रयासका रूपमा अनलाइन बुकिङ प्रारम्भ भएको उनले बताए ।
क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी
डलरमा कारोबार हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट कार्डबाहक यात्रुले अनलाइनबाट नेवानिको टिकट विश्वको जुनसुकै भागबाट पनि बुकिङ गर्न सक्नेछन् । प्राविधिक पक्षमा केही सुधार गरी केही समयपछि नेपाली मुद्रामा पनि टिकट बुकिङ गर्न सकिने गरी प्रणालीको विकास गरिने कंसाकारले जानकारी दिए । निगम नयाँ–नयाँ प्रविधि थप्दै पूर्ण प्रतिस्पर्धामा जाने योजनासहित अघि बढेको उनको भनाइ छ । भारतको वल्र्ड इन्फर्मेसन सिस्टम तथा थाइल्यान्डको टुसिपिसी कम्पनीले निगमको अनलाइन बुकिङ प्रणालीका लागि काम गरिरहेका छन् ।
यस्तो छ हवाई नीति
हवाई नीति २०६३ को दफा ५ को उपदफा ५.२ मा उडान सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ । यस उपदफामा वायुयान आयातबारे पनि उल्लेख छ ।
— ५.२.१ : प्रेसराइज्ड वायुयानको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफ ७५ प्रतिशत पूरा गरेको वा ४५ हजार प्रेसराइजेसन साइकल पूरा गरेको वायुयान आयात निषेध गरिएको छ ।
—५.२.२ : प्रेसराइज्ड नभएका वायुयानको हकमा वायुयानको केस–टु–केस बेसिसमा र वायुयानको रेकर्डहरूको पूर्ण जा“च गरिनेछ । तर, २० वर्षभन्दा पुराना वायुयानलाई आयात गर्न सामान्यतया अनुमति प्रदान गरिनेछैन ।
—५.२.३ : इकोनोमिक डिजाइन लाइफ ५० प्रतिशत पूरा भएका प्रेसराइज्ड तथा ननप्रेसराइज्ड वायुयानको हकमा स्ट्रक्चरल इन्ट्रिग्रिटी प्रोग्राम तयार गरी सोका आधारमा मात्र उडान सञ्चालन गर्न दिने ।
—५.२.४ : वायुयानको खरिद गरी वा लिज पर्चेज गरी पैठारी गरेका वायुयानहरूको पैठारी गर्दाको अवस्थामा ५ वर्ष या सोभन्दा
कम उमेर भएमा त्यस्ता वायुसेवा सञ्चालन संस्थालाई
प्रोत्साहन गरिनेछ ।